Adobe Shockwave kuregererwa kweWindows
Kana wakakurira neInternet, ndine chokwadi kuti unoziva nezveAdobe Shockwave. Purogiramu yatakanga tamboisa pane dzimwe nguva kutamba maombi multimedia nemitambo yemavhidhiyo. Yakabudiswa naMacromedia muna 1995, yakazowanikwa neAdobe mu 2005, platform ...
Isai Zvinyorwa kubva Kubasa PaWose MaWindows 10 Devices Pamwechete
Kuisa purogiramu kubva kune Store mu Windows 10 iri nyore. Iwe unongoda kuzarura peji yepurogiramu muApp Store uye woza bhatani Get Get download and install the app on your PC. Asi zvakadini kana une ma PC akawanda ...
Firefox Tumira: Shandisai Files Kusvikira 2.5GB
Ikoko hakuna dambudziko rehurukuro yepachena yekugoverana. Ichokwadi, kune mazana emakore kuchengetedza uye faira kugoverana mabasa kune. OneDrive, Google Drive, Dropbox, uye iCloud Drive ndiyo inozivikanwa faira yekuchengetedza uye kugoverana mabasa kunze uko. Firefox Tumira Firefox Tumira i ...
Nzira yekugadzira Lenovo USB Recovery Drive yeWindows 10
Iko kune zvakagadzirirwa muWindows 10 kuti ugadzire USB recovery drive. Vese vashandisi, kusanganisira vashandisi veLenovo PC, vanogona kushandisa shanduro yakagadzirirwa kugadzirira Windows 10 USB recovery drive. Dambudziko ne-built-in recovery recovery utility ndeyokuti haigoni kusika ...
Inguva Ipi Ungashandisa Microsoft Office Pasina Kuita?
Wakaisa kopi isina ruzivo yeMicrosoft Office 2019 kana Office 365 pane kombiyuta yako uye unoda kuziva kuti ungashandisa kwenguva yakareba sei chigadzirwa cheMicrosoft pasina kuchiita? Muchirongwa ichi, tichakurukura kuti munhu angashandisa Microsoft Office kwenguva yakareba sei ...
Google March 2019 Chirongwa Chekutanga: Migumisiro uye Matanho Okutorwa
Google yakabudisa shanduro yekushandura kwegoridhe paChNUMXth yaMarch gore rino. Uye pamwe nayo, zvinouya kune zvakawanda zvekufungidzira pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwayo, uye ndezvipi niches uye nzvimbo dzinofanira kuve dzakakanganiswa. Asi tisati tasvika mukati me ...
Mozilla Firefox 66.0 Yakabudiswa ne Sound Sound-Play Yakadzivirirwa
Mozilla Firefox 66.0 yakabudiswa mazuva maviri apfuura. Iye zvino inowanikwa mumabhuku makuru eUbuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10. Firefox 66.0 kubudiswa pachena: Block sound auto-play. Iwe unogona kuwedzera zvisizvo, kana kuti shandura chikamu chacho. Kutsvaga kutsvaga kuburikidza nezvekugadziridzwa patsva muTega ...
Avidemux 2.7.3 Yakabudiswa neMhando Dzakasiyana-siyana (Ubuntu PPA)
Avidemux video editor yakabudiswa mhando itsva yeg bug-fix kwemazuva 11 mushure mekupedzisira, nekugadzirisa zvinyorwa uye misc zvigadziridzo zvishoma Avidemux 2.7.3 kubudiswa pachena: Vapoursynth ikozvino yakatakurwa zvakasimba kuti irege kukanganisa kutadza ASF / WMV kumutsigira kugadzirisa BMP kugadzirisa kugadzirisa kugadziriswa P-enabled PNG decoder Basic save current ...
Isa Cave Story Uchishandisa Snap muBuntu 18.04, 16.04
NXEngine Evo, kunyorwazve kweklassic-side-scrolling platformer game Cave Story, zvino zviri nyore kuisa mu Ubuntu Linux uchishandisa snap package. NXEngine Evo iyi yakakwana yakazara-source-source clone / kunyorwa zvakare ye masterpiece jump-and-run platformer Doukutsu Monogatari (inozivikanwawo seCave Story) yakagadzirwa ne Studio Studio. ...
KeePassXC 2.4 Yakabudiswa neHigh-DPI Kuyera kwe4K Screens
Mushure mokunge mabheji maviri abudiswa, KeePassXC meneja wepawedi 2.4.0 pakupedzisira inogadzikana. Heino nzira yekuisa nayo mu Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, uye yakakwirira. KeePassXC 2.4.0 inoita kuti urongwa hwekugadzirisa urongwa hwe-high-DPI huratidze, hunowedzera wizard ye database, inoshandiswa kutsvaga tsvakurudzo, uye kushandura kwekutsvaga kweKeeShare kugadziriswa kwemashoko ...
Kid3 Tag Editor 3.7.1 Yakabudiswa, Nzira Yokugadzirisa sei mu Ubuntu
Kid3 audio tag editor yakabudiswa version 3.7.1 nhasi. Heino nzira yekuisa nayo mu Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10, uye yakakwirira. Kid3 3.7.1 inonyanya kunounza kugadzirisa uye kugadzirisa usability. Zvinhu zvakawanda zvitsva zvinotarisa Android version, iyo zvino inotsigira nhepfenyuro yerima, zviri nani ...
[Quick Tip] Shandisai Clock Kukodzero Yepamusoro Panel muBuntu 18.04
Iyi yekudzidzisa nokukurumidza icharatidza kuti ungatamisa sei awa kubva pakati kusvika kuruboshwe rwepamusoro pepamusoro mu Ubuntu 18.04 Gnome Shell. Zuva uye nguva ndezvokutadza kusarudzwa zviri pakati pepamusoro pepanhi muGnome 3 desktop. Zvakaoma ...
25 Sea, 2019 0
Kudonha 3 maoko-on preview - Mukana wakamirira kwenguva yakareba unotanga kubva ku limbo
Nhema yekuwana Nyaya dzeZuva Dzinonzi 'Cataclysms'; PC Kudzora uye UI Kutanga Updates Detailed
NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6 Graphics Card Review FT. MSI Hondo X ...
AMD Radeon VII 7nm GPU Inoita Nzira Yake Kugadzirisa Mabhenji Emuedzo
Zvekare Windows 10 19H1 Build Inobudisa Desktop Apps mu Windows Mixed Reality
Anthem Runs Smother on PS4 Pro kupfuura Xbox One X, 4K Checkerboarding Used on ...
Windows 10 Updates Break Again kune Vamwe Vashandi - Shandisai DNS yeGoogle ku ...
Asus inobuda kuApp Android Pie kuenda kune dzimwe nyika Zenfone 5Z: Heino nzira yekuisa nayo
FaceTime bug inoita kuti iPhone vese vanoshandisa yevesdrop pahurukuro; Apple ichiri kutora matanho
PUBG update #25 patch zvino inogara pane test server: Bizon SMG, Canted Sight, Vikendi ...
WhatsApp for web inotora mufananidzo-mu-chinyarudzo: Ndeipi nzira yekutanga nayo
Samsung Galaxy M10, M20 mutengo, zvakasiyana-siyana zvekuchengetedza zvakasvikira mberi kwekutanga
OnePlus 6T vamiririri vari kunyunyuta zvisina kujaira bhatiri rekurumidza kutsvaga: Pane nzira yekugadzirisa ...
WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger kuwirirana: Zvinorevei kune vashandi?
PUBG Mobile's zombie mode inotyisa, yakaoma uye yakanakisisa chiitiko chekaseka: Ongorora